Ebee ka 16 GB nke nchekwa dị n'ime nke Samsung Galaxy S4 | Gam akporosis
Samsung Galaxy S4, 16 GB nke nchekwa dị n'ime? HA!
Na Satọde gara aga, ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ teknụzụ Korea gara n'ihu Samsung, nke Samsung Galaxy S4 na ya kasị bụ isi nlereanya na 16 GB nchekwa dị n'ime na nhazi ya Snapdragon 600.
Ọ bụ ezie na dị ka ndị na-azụ ahịa nke ọnụ ahịa ọhụrụ a nke Samsung, banyere ebe nchekwa Odighi ka ereputara anyi ya na agwa ya ma obu Nka na ụzụ nkọwa.
Anyị niile maara ihe gbasara nchekwa nchekwa dị n'ime Ọ bụghị ezigbo data, ebe ọ bụ na akụkụ ya adịghị n'ihi na ọ nwere ụlọ faịlụ nke sistemụ arụmọrụ na ngwa ndị arụnyere na njirimara na njirimara nke ekwentị.
Nọmalị anyị na-efunahụ n'etiti 25 na 30% n'ihi ihe faịlụ sistemụ ndị a na ngwa ndị arụnyere na mbụ, ọ bụ ezie na n'ihe gbasara ọhụụ Samsung Galaxy S4 ihe a gara n’ihu.
Site na ikike izizi nke 16 GB, onye ọrụ nwere ike ịnweta naanị karịa 8 GB, ndị fọdụrụ na-arụ site na hotara na mbụ usoro faịlụ na ngwa ma ọ bụ ọrụ ọhụrụ nke a ọnụ. Samsung dị ka nchọpụta olu, ikike ịgbaso anya anyị mgbe anyị na-agụ ihe, njikwa ụwa niile ma ọ bụ ngwa dịka S-Ahụike o S-Njem.
Na nkenke, ihe ohuru Samsung Galaxy S4 abịa na ebe nchekwa nchekwa dị nnọọ obere 8 GB, ebe ihe dị ka 50% nke ya bu bloatware nke ulo oru Korea na oru ohuru ohuru di iche iche.
Ọ bụrụ na m bụ otu n'ime ndị na-azụ ahịa ọgbọ ikpeazụ a, ka anyị cheta na ọ na-efu oke 699 euro, M ga-eche na wayo na ghọgburu, na ọ bụ na otu ihe bụ na anyị na-atụfu abụọ ma ọ bụ atọ GB nke ikike e guzobere na njirimara ọrụaka ya, nke ọzọ bụ ihe na-eme n'ihe banyere Samsung Galaxy S4 na ọnwụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% ebe nchekwa doro anya.
Ozi ndị ọzọ - Samsung Galaxy S4 ga-abata na Eprel 27, Gangnam Style na ngosi nke Samsung Galaxy S4 na India
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S4, 16 GB nke nchekwa dị n'ime? HA!
Delmo Gozo dijo
Ihe kachasị njọ nke androidsis niile. Ekele m
Zaghachi Delmo Gonzalez Gozo
Ikwu na ọ dị gị ka ịgbajie ma dọpụ gị naanị n'ihi ikike nchekwa ekwentị gị bụ nzuzu. Enwere m 16 Xperia P nke nwere 11 GB. Eziokwu bu na enwerem naanị 3 GB nke egwu na ngwa nile m nwere.
Zaghachi Dante 24
Ọ bụ echiche a na-akwanyere ùgwù kpamkpam, ọ bụ ezie na ọ ga-efu ha ọtụtụ ihe iji tinye nkọwa ndị akọwapụtara nke ọnụ ahụ?
Na 02/05/2013 00:32 PM, «Disqus» dere, sị:
Ihe nkọwa ndị ahụ dị adị. Ọ bụrụ na echi, ịchọrọ ịwụnye ROM dị iche. Ekwentị ga-enwe 16GB yana.
Anaghị m agbachitere SAMSUNG, mana echeghị m na ọ dị mkpa iwepụta ihe sitere na gburugburu nke na-eme na nchekwa ụwa. Anyị amataworị na draịva ike 1TB anaghị agụnye 1024Gb.
Nke a na-eme na mwepụ nke ugbo ala dị ka nke ọma. 1998gbọ ala 2.0cc. Ọ bụ a 1049 na m ọgba tum tum na nwere 1000cc bụ a XNUMX.
Ọ bụ otu ihe inye ihe ọmụma banyere akwụkwọ ahụ ma bụrụ onye na-anọpụ iche na nke ọzọ dị iche iche iji nye echiche gị nke onwe gị nke na-agbada ihe edeturu, ọtụtụ ndị enweghị mmasị na ọ dịghị ka ọkachamara. E wezụga nke ahụ, ị ​​ka na-aza ndị na-enweghị mmasị n’echiche gị. Nke ahụ adịchaghị njọ.
Kpamkpam dị na isiokwu a. 50% nke ikike dị ka mkparị nye m, ya bụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ojoro.
Otu nke diski ike, na anyị na-ahụ dị ka ihe nkịtị, ọ bụkwa ya. Ndị na-emepụta ihe na-atụle ikike n'ụzọ aghụghọ, ebe ha ghọtara na 1 Gb na 1.000 Mb ma si otú a na-ezu ohi ọtụtụ Gb. Ọ bụghị ihe ezi uche dị na ịzụta 1 Tb draịvụ ike nke n'ezie nwere 930 Gb.
Ọ na-eme m obi ekele ịhụ ka ọtụtụ ndị ọrụ na-agbachitere nnukwu ụlọ ọrụ teknụzụ kama ịchọ ihe dị mkpa na ịdị mma na ngwaahịa ha, na mgbakwunye na ịnwe mgbasa ozi na-eduhie eduhie n'ụzọ dị jụụ, na ọ bụghị n'ihi na ọ ghọọla nke nkịtị, ọ na-akwụsị ịbụ ya.
M nọnyeere gị 100%. Ọ bụ ojoro ma ọ bụrụhaala na anaghị agwa gị iwu nke ihe ị nwere n'ezie na nchekwa mgbe ị were ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N'okwu m, enwere m Xperia Z3 na site na 16 Gb Naanị m na-ahụ na enwere m 3,80 Gb fọdụrụ maka ojiji. Nke a bụ ohi.
Ekwesịrị ịmara ndị na-azụ ahịa maka ihe ahụ merenụ ma ọ bụrụ na ọ naghị adịrị ha mfe ịhọrọ akara ọla edo ...
Ihe mbụ m hụrụ bụ na mgbe m hụrụ ya na MediaMarkt, echere m na ọ bụ n'ihi foto, vidiyo, wdg ka ọ kwadowo, mana MBA, ọ biala na 8GB dị ka ọkọlọtọ.
Zaghachi Teban D. ™
Ọnụ ya nwere ezigbo 16gb, nke ahụ bụ eziokwu, ha na-ekewa n'ụzọ ụfọdụ. Ma ọ bụ ị ga-azụta 320 HDD ma ị na-eme mkpesa mgbe oge nkewa ị nwere 290 reais?
Tụkwasị na nke a, ị naghị egosi ọbụna nseta ihuenyo otu esi akwado ihe ị na-ekpughe ebe a, n'ikpeazụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ euro 699 maka ọnụ ya, enweghị m obi abụọ ọ bụla na ịnweghị ike itinye euro ole na ole maka ebe nchekwa dị na mpụga n'ihi na ọ nwere nke ahụ Enwere ike ịme ihe.
Zaghachi Javier Acosta
M na-ekwu na nke a na-eduhie ndị mmadụ dị ka ebe nchekwa n'ezie maka iji zụrụ ihe na ịnụ ụtọ ọ fọrọ nke nta ọkara nke akọwapụtara. Daalụ.
Na 02/05/2013 00:57 PM, «Disqus» dere, sị:
Mana ọ bụrụ na anyị atụkwasị obi n’ihe ị kwenyere, ụlọ ọrụ niile na-aghọgbu ndị mmadụ! Ọ dịghị onye na-ekwu na nchekwa ahụ n'ezie, wepu 1, 2 ma ọ bụ ọkara, nke a bụ "mgbasa ozi na-eduhie eduhie." Mana ọ dịka ọ dị m ka ị na-ebufe site na ebubo dị ka nke a. Daalụ
Echere m na ị na-agbagha echiche ma chọọ ịgbachitere ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, kedu ka ọ ga - esi zụta ọnụ na 16 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ma nwee naanị 8 GB fọdụrụ?
Ihe ọzọ ga - abụ na ịnwere 13 ma ọ bụ 14 GB n'efu, nke bụ ihe kwesịrị ịdị nkịtị.
Na May 2, 2013 02:37 pm, Disqus dere:
Anaghị m agbachitere ihe ọ bụla, ekwenyere m na ọ bụrụ na ha kwuo 16 ọ bụ 16, mana ị na-ekwubiga okwu ókè site n'ikwu okwu dịka aghụghọ na aghụghọ.
Ọ bụrụ n ’ịzụrụ ụgbọ ala nke ha gwara gị nwere 120 HP nke ike ma ha nye gị 60 HP, ọ bụ ojoro ka ọ bụ na ọ bụghị?
Echere m na nke a bụ otu ihe na ekwesighi iduhie ya n'ụzọ ahụ .. Ekele.
Na May 2, 2013 03:36 pm, Disqus dere:
Ọnye na -bụ Ricardo Ventura? dijo
Ka anyị hụ ... ekwentị nwere ebe nchekwa 16GB, sistemụ arụmọrụ na-eji 8GB, ị nwere 8Gb fọdụrụ, ọ dị mfe, Samsung anaghị agha ụgha. Ka ị na-aga ime mkpesa na HP n'ihi na ị zụtala kọmputa nwere 500GB diski ma enwere ndekọ a na-akpọ WINDOWS nke na-etinye 20 GB? Na - eme ụfọdụ ihe oge ụfọdụ n’ezie ... E wezụga nke ahụ, amaghị m ihe nke a bụ maka ugbu a, ndị nrụpụta niile na-akpọsa ngụkọta draịva siri ike, ọ nweghị onye na-akpọsa ihe dịnụ mgbe ị wụnye sistemụ arụmọrụ, ọ bụghị ihe ọhụrụ, na ntụnyere Na ụgbọ ala ọ dị ka ihe egwuregwu nye m ... ị ka mma ịkwu mkpesa banyere ụgbọ ala gị na-ekwu na site na ntụ oyi na ya enweghị 120hp mana 100hp n'ihi na ikuku na-eri 20hp, na onye nrụpụta ahụ dọkapụla gị, ka anyị hụ oke ọnụ ha na-eme gị ...
Zaghachi Ricardo Ventura
Ọ dị m ka ị ghọtaghị ihe kpatara edemede ahụ na mkpesa m. Anyị niile maara na usoro ahụ na-ewepu GB nke ebe nchekwa dị n'ime, mana na nke a, echere m na ọnwụ nke 50% nke ya nwere ike ịtụle oke ma e jiri ya tụnyere ihe nkịtị na ụdị ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ, nke bụ 25 ma ọ bụ 30%.
Na 02/05/2013 09:32 PM, «Disqus» dere, sị:
Charles Dominguez dijo
Ezigbo m, ọ dị mfe dị ka a ga - asị na ịchọrọ inwekwu gb, gaa ma wụnye rom ọhụrụ, ihe ha rere gị na ụdị a, ị kwuola n'onwe gị, ha bụ ọrụ ọhụrụ nke ekwentị, mana ọ bụrụ na ị adịghị amasị ha na ị na-ahọrọ ohere gị azụ ebe ahụ ị nwere ihe ngwọta, ahụrụ m ụdị mkpesa a na-achị ọchị, ebe ọ bụ na onye na-azụ ahịa na-achọ mgbe niile ọtụtụ ngwaahịa na-enweghị efunahụ ihe ọ bụla na nloghachi, nke n'onwe ya bụ ihe ọchị.
Ọ bụ ihe nzuzu na anyị na-ekwu maka ojoro, naanị n'ihi na ama ama a na-eji di na nwunye nke GB karịa nkịtị, ikekwe onye okike nke isiokwu a nwere iPhone nke sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na 16 ma ọ bụ 32 GB kpamkpam n'efu ... n'ezie NOOOOO !!!! Yabụ ọ bụrụ na ụdị niile ga - eji ohere 2,4 ma ọ bụ 8GB nke ohere maka sistemụ arụmọrụ ha na ngwa serial, yabụ gini mere ị ga - eji nyochaa ọnọdụ a ... ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-nta na obere OF .. N'ezie, bụghị !!! Ọ bụrụ na ihe niile na-abawanye na nha !!! lee egwuregwu kọmputa ugbu a, ha bụ 2GB ọ bụla n'ihu naanị otu egwuregwu ... yabụ ihe niile na-eto,
N'oge ahụ Galaxy S4 na-abịa na ebe nchekwa dị na 16GB, mana n'oge na-adịghị anya ndị nwere ike kachasị ukwuu ga-apụta, ọ bụ naanị na a ga-atụ anya ya ...
Maka nke ahụ ị tinyere dị ka gam akporo niile, ebe nchekwa 64GB Micro SD na-efu ihe $ 56. Ebee ka ichoputara na "TIMO" ma aghotaghi m ihe mere na ikwesighi ikwuputa ya ... Obu mgbe mmadu gha agha ugwo $ 700 maka iPhone 16GB ya na ebe o nweghi ntinye Micro SD, ihe Apple nyere ị nwere echiche dị ịtụnanya ịzụta 32GB maka $ 100 karịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ 64GB ị ga-akwụ $ 200 karịa nke mbụ iji nweta nke na-eweta naanị 64GB (HERE B THE EZIOKWU EGO !!!, I nwere kpuo ìsì ka ị ghara ileghara nke a anya !!!), Mgbe Galaxy nwere naanị $ 59, ị ga - enweta ekwentị yana 16GB + 64GB = 80GB.
Ichoro igwa m na imaghi nke a ??? R. N'ezie, ma ị dere naanị megide Samgung, n'ihi na ha zụtara gị ma ọ bụ n'ihi na ị bụ nwata nwoke ọzọ na-akwado apple nke bitten!
Mara: Ọ bụrụ n ’ị ga-ekwu okwu, adala n’akụkụ, kwuo eziokwu ... Ekele!
Daalụ Francisco maka akụkọ gị banyere isiokwu a, ebe ọ bụ na o nyeere m aka ịkọwa ihe kpatara igbe ahụ ji tinye 16 GB na ekwentị naanị gwara m na ọ nwere 8, amaghị m na sistemụ arụmọrụ ga-eri 8 GB. Echere m na ha nwere m timao hehe grax… ..
I nwere ihe nile kpatara ya. Naanị m zụtara s4 ma ọ bụ naanị 8gb nke ebe nchekwa fọdụrụ. Ọ bụ nzuzu ihe ha na-eme gị. N'aka nke ọzọ, Samsung anaghị agha ụgha, mana ọ naghị edo ihe eziokwu nke ngwaahịa a dị. The engine bụ 120cv bụ truedd. Ma ọ bụ naanị Ome 60cv. Akpan akpan ama etie mi ke idem. Los nokias gwara gị 16. Ma ọ bụ ezigbo 16GB iji.
Kasị njọ ka enwere m 7000Gb note N16 na cyanogen, dị maka iji 11gb iji wụnye spp 2gb WTF M ga-ahụ ihe spp m nwere ike ịmegharị
Zaghachi Martin Jesus Cheveste
Ebee ka ị si nweta na ọ bụ naanị 8 fọdụrụ? : p ma ọ bụrụ na s4 qe dị iche iche nwalere niile nwere ọnwụ nke 11 😉
Zaghachi Albertto Hernandez
Ka anyị hụ paquito, abụla onye nzuzu, ụdị niile na-agha ụgha, ahụkwala m xperias zl, nexus, lg opimus g na ọ nweghị onye n'ime ha na-eweta ebe nchekwa ọ na-enye, ha na-ewekarị 4 ruo 6 gb site na ngwa na sistemụ
Onweghi ihe jikotara ya na disk ... disk ga adi 320 GiB ... sistemu eji aru oru ya na GB ... o bu ya mere o ji agwa gi obere ... ya mere onye obula.
Maka m na-ekwukwa na o nwere 16gb ma nwee 50% nke nke ahụ dị..ọ bụ aghụghọ..n'ezie o nwere 16gb mana ha na-arụsi ọrụ ike na enweghị ike iji ha na ha dị ndụ.
Enwere m galaxy s3 ma agaghị m agbanwe ya maka s4 hụrụ ihe m hụrụ abụghị nnukwu ihe ọ ga-awụlitere m.
Ndewo ndị enyi. N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ahịa a na-ewu ewu na Spain anyị. Otu ọnwa gara aga, azụrụ m GALAX mobile S4 N9500 ​​kachasị ewu ewu na ụlọ ahịa ahụ. S4 Galaxy N9500 ​​ekwentị 5.0 nke anụ ọhịa ahụ! 80% ego! Nke a bụ ọkacha mmasị m! Naanị € 159.99.
Echeghị m na ahụmịhe mbụ m nwere n'ịntanetị dị ezigbo mma, yabụ obi ụtọ. Ekwentị dị ezigbo mma, ekwentị ọhụrụ a, gburugburu ebe obibi, dị ezigbo mkpa, uru zuru oke maka ego. Obi siri m ike ikwu na ọ bụ ọnụ ala na Spain, ebe ọ bụ na ọ nwere had 159.99 Euro. Izu gara aga ị hụrụ S4 Galaxy N9500. Ọkwa ọhụụ na ụlọ ahịa a. Enwere m mmasị miri emi na ekwentị ọhụrụ a na atụmatụ ndị siri ike.
Ihuenyo mbu: 5 sentimita asatọ
Ike Platform: MediaTek MT6589-Qual-Core 1.2 GHz
Esịtidem: RAM: 1G + ROM: 2GB
Ọrụ usoro: Android OS, v4.2.1 (Froyo)
Ọnọdụ MS: WCDMA / GSM
Site na Frquency Band: WCDMA 2100/850 (HSPA +) na GSM 850/900/1800/1900
Kaadị SIM: Kaadị SIM abụọ dị na njikere
Nsorouzọ: GPS + AGPS
Ngosipụta: Agba 5.0 ″ 1600K IPS
Ngosipụta: 1280 * 720 pikselụ
Igwefoto: Igwefoto n'ihu nke 8MP AF 3,0MP, ọkụ ọkụ
Ihe ngosi vidiyo: Kwado ndekọ vidiyo 1080P
Adịghị m ala azụ ịzụta ya, n'ihi na ụlọ ahịa ahụ isonye na 80% ego ncheta ire ere. Nke a MTK6589 5.0 nke anụ ọhịa ahụ gam akporo 4.2 asatọ-isi Euro nkecha ekwentị mkpanaaka € 300,99 mbụ price N9500 ​​Galaxy S4 Quad-isi, ugbu a nanị na-eji € 159,99. Obi dị m ụtọ nke ukwuu inwe ike iji obere ego zụta ezigbo ekwentị. Nke a bụ oge m abụọ na ụlọ ahịa ịzụta ekwentị mkpanaaka, ezigbo omume ọrụ ndị na-ere ere, nnyefe ọsọ ọsọ, ọnụ ala na ogo dị elu. Ndị ahịa niile masịrị m, otuto niile maka ekwentị ọhụrụ a. Ndị enyi m niile na-enwere m anyaụfụ ịzụrụ ezigbo ekwentị. Nyaahụ, a na-enyekwa ha iwu n'ịntanetị. n’okwu, zuru okè. Echere m na ị ga-enwe otu ụdị ahụmahụ ịzụ ahịa zuru oke. Kedu ihe ị na-eche? Echefula ekwentị kachasị mma nke afọ, echefula nnukwu nkwalite nke ohere dị ukwuu.
Alexander lopez dijo
Ekwenyesiri m ike na Francisco, ị na-akwụ ụgwọ euro 699 maka 8GB nchekwa. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-adịghị mma na ị nwetabeghị echiche na OS, ngwa wdg na-eji 50% (nke yiri ka ọ karịrị m) mgbe ihe nkịtị na-abụkarị 25% ma ọ bụ 30% n'ihi na ebe a ihe dara ... Ọ dị m ka ndị Samsung fanboys agaghị ekwenye na m 🙂
Zaghachi Alejandro Lopez
Ọ dị m mma ịgwa n'isiokwu ahụ banyere ikike nchekwa nchekwa nke ekwentị na-abịa, mana site na ebe ahụ ịsị na ha na-egwu ma ọ bụ na-aghọ aghụghọ, ọ dị m ka ebubo dị oke njọ ebe ọ bụ na ebe nchekwa ọ na-abịa bụ 16gb dị ka mara ọkwa, ihe ọzọ bụ na ọ na-abịa na OS na-ebu ngwa ngwa ngwa nke bụ akụkụ nke isi mma ya n'oge ahụ. Ọ bụrụ na ngwa ndị a na-ewute gị ma ọ bụ na ịchọrọghị ha, ịnwere ike ịwụnye ROM dị ọcha ma nwee nchekwa niile n'efu. Inye echiche nke onwe gị bụ otu ihe mana ebubo na nkwutọ bụ ihe ọzọ.
Zaghachi Carlos Tobon
Ndewo, enwere m s4, m gbanye mgbọrọgwụ ya, .. ị ma na m nwere ike ihichapụ n’emebighị ekwentị. ekele
Zaghachi ka egwuonaorico
Cristian Mora dijo
Echeghị m na ọ bụ ojoro na mbụ n’ihi na ha anaghị ekwu na ọ bụ gigs 16 nke nchekwa ọ na-ekwu naanị gigs 16 ihe ọ bụla
Zaghachi Cristhian Mora
Ieslọ ọrụ na-ere gị GigiByte (GiB), nke na-abụghị GigaByte (GB). Ọ dị ka pendrive, kọmpụta gụrụ gị obere ka anyị chere na ọ nwere. N'okwu a. 16 GB na GiB bụ: 14,90 GiB, ọ bụkwa eziokwu na android (rom, nke na-abịa na ndabara), na-atụle ihe dịka 2 GiB, na-agụghị ngwa ndị arụnyere. Ka o sina dị, anyị ga-enwe ihe dịka 11 GiB nke ohere iji ebe nchekwa anụ ahụ.
Buru n'uche na GBs bụ okwu ahịa, ha anaghị ere gị ihe ha gwara gị n'ezie, ha bụ GiB (na usoro ọnụọgụ abụọ, dị ka kọmputa na-agụ).
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inyocha ya, gbalịa itinye ebe nchekwa dị na kọmputa gị wee hụ na ihe ị nwere abụghị ihe ị chere n'ezie!
Ndị ụlọ ọrụ anaghị aghọgbu anyị! Anyị na-ekwe ka a ghọgbuo anyị! ...
Odi nma! N'ikpeazụ a larịị ikwu! Udfọdụ ndị na-akpasu iwe ma na-eme ihe ike na-echegbu onwe ha. Ọ bụ ihe nwute na ụfọdụ anaghị ejikwa ụdị ejiji ma ọ bụ mechie ọnụ.
Zụta PC nke kpọsara bụ 320 GB wee bịa na windo, ụlọ ọrụ, antivirus na ndị ọzọ ... Lelee diski ahụ na dimw ma ọ bụrụ na ị nwere 320 GB. Swind? Nke ahụ na - eme na ngwaọrụ niile ... N'ezie ọ bụrụ na itinye ROM ọzọ ma hichapụ ngwa samsumg nke na - enweghị mmasị gị, ị ga - enwe ebe nchekwa ọzọ .... Enwere m S2 na ezigbo Memory bụ 11GB ọbụlagodi mgbe ọ bịara na 16, enwere m 32GB na enweghị ma enwere m ebe nchekwa ọzọ ...
My nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10Gb dị ... mana ọ bụ eziokwu na ọ bụ ezigbo aghụghọ itinye 16Gb na igbe ahịa, ọ bụrụ na etinyeghị m ihe ọ bụla, ha ga-aka mma
My s4 bịara na nke dị 8.82GB nke mgbasa ozi 16GB. M gaara azụta ya, ma m gaara achọ ka akọwa ya. Aga m azụta 32 micro sd ọ bụ ezie na m nwere 16 gb.
Vanessa Diez Zamora dijo
M na-abịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10Gb n'efu, nke ọma, ntakịrị mmechuihu, mana etinyela m 8Gb n'akụkụ kaadị m ... ọ na-eme maka njirimara ekwentị
Zaghachi Vanessa Díez Zamora
Site na m si ele m anya na ọ bụ ojoro site na Samsung na-eme omume ọjọọ na omume ruru unyi na ebumnuche RL bụ ire nnukwu ahịa, aghụghọ ndị mmadụ ebe 8 GB abụghị ihe ma chee ma ọ ga-ebudata ngwa ndị ọzọ, egwu, eserese na hd wdg, na-ahapụ ihe ọ bụla na ewepụghị m ahụ ya ọchị n'ihi na ọ ga-etinye ezigbo micro sd n'agbanyeghị agbanyela euro 700 nke plastik dị ọcha.
Ọfọn, ihe m chere bụ na tak carlos dị njọ n'ụbụrụ na xperia nne na-ekpo ọkụ na ihuenyo dị mma, nwanne m nwoke na enyi m zụtara ya na ọ nweghị ihe ọ bụla gara were gaa ụlọ ọrụ ọrụ d telcel ma ha gwara ya qbka ram memory desoldo na odighi mgbanwe ma obu nkwụghachi !!!! Ewezuga nke ahụ n'ime, akụrụngwa ahụ nwere ụdị hahahaha ọ bụla ... ọ nweghị ekwentị ma ọ bụ akụrụngwa kọmputa na-eweta nchekwa ya ... yabụ na iwe were ya iji gbaa Toshiba, hp, sony, lg aka, o doghị anya ihe ọ bụ kpuo ìsì ka ika ma Okay …… ..
Zaghachi Judith Gomez
Zaghachi Sergio Hernández
Ezigbo echiche! Aga m ere otu ama nwere 100GB nke nchekwa dị n'ime. N'ezie, sistemụ arụmọrụ m dị 90GB ...
Daalụ Francisco maka ozi ahụ na eziokwu ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ụdị nkọwa ahụ. Obere oge echere m na S4 m bụ nitationomi ... hahaha na ihe ọzọ, ọ dịghị onye bụ mkpụrụ ego ọla edo iji dị mma na mmadụ niile. Ekelere m gị ma gawa.
Zaghachi na dalofe
Ekwenyere m na ederede bipụtara ebe a. . Nakwa na ọtụtụ n'ime nkọwa. Enwere m s4 na gigs abụọ nke ebule adịghị eweta ma. N’ebe ahụ ka m na-eche na a ghọgburu m. 700 na 700 euro. Ikwesighi ịkpọsa ihe adịghị. Ihe ziri ezi ga-abụ ịkpọsa ohere dị maka onye ọrụ. Mgbe ị na-aga ịzụta pc, mgbasa ozi (ọbụlagodi na ọ bụ m ikpe) tinye ọtụtụ gigabytes maka onye ọrụ ... mana anyị agaghị ata ụta Samsung ma, ebe ọ bụ na nke a bụkarị ụdị niile. Echiche kacha mma! Ma agbakwala ụka maka obere obere usoro nwere ikike ma ọ bụ obere ikike na-arụ ọrụ dị ka ihe nkiri!
Nanị m zụtara galaxy s4 m nwetara na nchekwa dị n'ime ya jupụtara! nke 16 GB !!!!! na nchekwa ekwentị na-ekwu na m ka nwere 11 GB! Gịnị mezie? ma etinyeghị m karịa facebook, pinterest na poquet nke na-anaghị ewe nnukwu ohere iji jupụta 11 GB! Enweghịdị m foto ma ọ bụ vidiyo n'ihi na ọ dị ọhụụ! ị nwere ike inyere m aka?
Restorelọ ọrụ weghachite wee hụ ma edozi ya, ọ bụrụ na iweghị ya n'ụlọ ahịa ebe ị zụrụ ya wee dochie ya n'ihi na ọ nwere ike mebie nchekwa dị n'ime
Na November 23, 2013 21:59 ụtụtụ, Disqus dere:
hehe m zụtara obere mbadamba nkume nke m chọrọ ilele vidiyo na ịhụ ọmụmụ na pdf na nke ọma kama ịbụ 8 gigs ọ bụ 5 na ihe fọrọ nke nta ka 6Gb, ọ dị m ka ọ bụ na enweghị m ike ịnweta 8Gb, nwanne m nwoke zụtara a mbadamba 4 gigabytes diske n'ihi na n'ezie na ọ bụ 1.7 gigabytes ihe ị hapụrụ, oge ọzọ m ga-eche banyere ya.
Zaghachi carlos manuel del angel Mercado
Elian Pineyro dijo
Enwetara m LG Optimus L1 II e411g 2 ụbọchị gara aga, eburu m ya na ihe niile dị ka oge izizi ịbudata na ibudata, na mgbe m jikọtara ya na ekwentị iji chọpụta 4 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya kwesịrị, ya na-agwa m na o nwere 1,76 GB. N'ime ụbọchị 2 m ga-eme mkpesa, n'ihi na ọ bụrụ na m nwere ebe nchekwa ndị ọzọ, mgbe m jikọtara ya na PC ọ ga - asị "1,76 GB na - akwụghị ụgwọ 4GB", mana mba. Ọ na-agwa m na ọ bụ 1,76 TOTAL.
Zaghachi Elián Piñeyro
Kpamkpam dị na isiokwu a. 50% nke ikike dị ka mkparị na m, ya bụ, ojoro.
ESTIMATES MY SONY Z3 COMPACT EQPIPT nwere nsogbu nke 16 GB nke ncheta na naanị 12 nke 6 GB B PART B PART NT PARTKW PARTKW OFKW OFKWQKW THEKW EKW EKW EKW EKW EKW ,KW ,KW ,KW ,KW, ahụ ahụ, MERE M KWURU naanị 6 n'efu ONYE KA M KWURU… ??? Iji SONY Ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ ekwentị.
Ezinne castro dijo
Ndewo nye onye ọ bụla eziokwu K afọ gafere na ha na-aga n'ihu na-ekwu okwu HEHEHE …… Ọfọn m na-ewetara gị nchegbu m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na Nwelite ọrụ nke LOLLIPOP EBUPU NA-agafe SAMSUNG S4 I9500 ?????? DAALỤ
Zaghachi txuby castro
Ọ bụ eziokwu na enwere ndị anaghị arụ karịa 5 GB mana ọ bụrụ na ha kwuo na cell nwere 16GB n'ihi na aunk dị 12 ma ọ bụ 13GB dị, ị na-eji ekwentị gị eme ihe ịchọrọ ma enwere ndị ọ bụrụ na ha chọrọ itinye vidiyo niile ma ọ bụ ihe nkiri na ya, ha nwere k ike nke bụ ya kpatara ụdị dị mfe ji akwụ ụgwọ karịa k
daniel odo dijo
ha mụtara ịgha ụgha site na China cloners!
Zaghachi odo daniel
Ebumnuche bụ ịgbanwere echiche na esemokwu ma biko biko n'ụzọ nkwanye ùgwù na-emejọghị onye ọ bụla. Francisco gosipụtara naanị anyị nsogbu dị mfe nke na-eme nke ọma. enwere ndị ahịa na-achọkarị ebe nchekwa zuru oke dịka mkpa ha si dị, nri. ọtụtụ, iji kpọọ ihe atụ, na-egwu egwuregwu ndị na-achọ nnukwu ikike nchekwa. Anyị ndị maara ebe anyị si wee na ebe anyị na-aga banyere ekwe ntị na-enyocha ozi sitere na ya n'ụzọ eziokwu na atụmanya. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ozi nke ekwentị na ịntanetị, ịsị, na ileba anya mbụ ya na ọ nwere 16GB, ị na-ekwu: nke a bụ ihe m chọrọ, nri. ma mgbe ịzụrụ ị na-achọpụta na naanị ị nwere 8gb. maka nbudata ha ga-agwa m na ha ga-enwe afọ ojuju. mba. nke ahụ bụ echiche nke Francoco chọrọ ime ka anyị mara. Ọ dị mma ị nwere ike ịzụta ebe nchekwa dị na mpụga mana lelee ihe, enwere ngwa ndị na - enweghị ike ịkwaga nke bụ ihe na - emechu ihu. agbanyeghị na-aga na mkpa ojiji nke ọ bụla ọrụ. Ka anyị kekọrịta echiche iji mụta iwe iwe. Daalụ.
Aghọtaghị m ihe kpatara na ndị nrụpụta maara njedebe nke sistemụ sistemụ ha anaghị eme ka ebe nchekwa dị ọtụtụ na gigabytes abụọ ma ọ bụ atọ karịa maka faịlụ na ntọala ha kama iwepụ ikike n'aka onye ọrụ.
Na-ekwenye kpamkpam Francisco.
Azutala m ya. Ugbu a ọ bụghị ihe ọhụụ ma ọ bụ dị oke ọnụ mana enwere m ndakpọ olileanya na m nwere ọkara nke ohere mgbasa ozi.
Aghọtaghị m ihe kpatara iwe ji ewe ndị mmadụ. Na-ekwu ihe otu ha si dị.
Na mgbakwunye, onye ọ bụla kwesịrị ịnwe ikike ihichapụ ngwa ndị arụnyere, ọtụtụ n'ime ha esoghị sistemụ arụmọrụ.
Mgbe ekwentị dị ọhụụ ọ nwere akụnụba iji chekwaa, mana ka oge na-aga, mmefu ọ bụla na-enweghị isi nwere ike ịchekwa na-emetụta oke mmiri nke ọnụ.
Ihe na-adọrọ mmasị
jụụ akpati dijo
mfe m mgbọrọgwụ ya m zụrụ sd nke 32 gb ma ọ bụ obere m nkewa ya ma jiri link2sd ma dozie nsogbu m nwere ike ịmegharị ngwa niile na-enweghị nsogbu oghere ekele mgbọrọgwụ nke dị
Zaghachi na akpati tranqui
O kwesịrị ịdị ka nri juru n’ime ya. Net "ibu" na "oké arọ" kwesịrị gosiri. Ma ọ bụghị ya ọ na-eduhie.
Chorras ngwa nke izu: Taa ịnyịnya ibu na-ekwu okwu
Angry Birds Angry dị na Mee 2 na Storelọ Ahịa Play